Mandeha manodidina anao ve ianao? -laharana ambony proteinina fanampin miaraka amin'ny fitaovana fitsaboana maoderina? Fantaro raha mendrika ny hambom-po ny hormonenan'ny zavamaniry. Fantaro ny tombontsoa ho an'ny HGH, ny fiantraikany, ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina, ary ny maha-ara-drariny azy araka ny fenitry ny FDA.
Ao ambadiky ny bodybuilder elit rehetra, misy ampiana proteinina miafina, izay mety tsy ho fantatrao mihitsy. Miresaka momba ny fahombiazan'ny Hormone (Growth Human Growth Hormone) (HGH).
Na dia mampiseho ny toetra anabolika aza ny HGH dia tsy toy ny steroid toy ny testosteron. Io hormone io dia tena ilaina amin'ny fahatsaran'ny olona iray satria manatsara ny fomba fiasa metabolika maromaro. Raha tokony hamaritra mazava tsara ianao, dia tsy maintsy ampitahao ireo tombontsoa rehetra azo avy amin'ny hormones hafa.
Ny HGH dia anisan'ireo zava-mahadomelina hormonina manana fankatoavana azo antoka avy amin'ny FDA. Na dia misy olona aza hampiditra azy ao anatin'ny fitondran'ny taovam-pandevonan-tsolika, dia zava-dehibe ho an'ny fampiasana fitsaboana ny fitsaboana. Na izany aza, raha tokony hampiasa izany amin'ny fangatahana klinika ianao dia mila dokotera tena izy.
Ity lahatsoratra ity dia tsy manala ny fampiasana HGH bodybuilding fanampim-panazavana, nefa manome fanazavana kely momba ny zavatra andrasana rehefa mandray ny fanampiana. Alohan'ny hampiasana ny hormonenan'ny fitomboana, dia ataovy azo antoka tsara ny mamakivaky ity ampahany ity.
1. Hormonal Growth Human (HGH)
Ny Hormone Mankalaza ny Human dia asidra amino 191 izay mitranga ao amin'ny vatan'ny mamono. Izy io dia polypeptide tokana, izay manentana ny fitomboana sy ny fampandrosoana. Ny sela somatotropika ao amin'ny vavony fisotro madio dia tompon'andraikitra amin'ny fampiasana azy, ny fitehirizana ary ny tsiambaratelo.
Ny Hormone Mankalaza ny olombelona dia natao avy amin'ny molekiola samihafa, toy ny 22-kDa sy ny volo 20-kDa kely.
Ny tsiambaratelon'ny HGH dia miankina amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny torimaso, ny fampiasana, ny sakafo, ny lahy sy vavy, na ny taona. Ohatra, rehefa matory, ny hypothalamus dia hanosika ny Hormone Growth-Hormone mba hampiroboroboana ny famotsorana ny GH. Mihabetsaka koa ny hormone amin'ny fahamaotiana, mandritra ny fifadian-kanina, ny asan'ny fikarakarana ara-batana, ny tahan'ny siramamy ambany, na vokatry ny adin-tsaina ara-batana. Mifanohitra amin'izany, mihena ny taonany, ny lanjany, ary ny fihinanana sakafo.
Ny sekretera HGH dia eo an-tampon'ny fahazazana sy ny fahazazana. Amin'ny ankapobeny, ny vatan'ny tanora iray dia hikorontana hatramin'ny 700μg ny hormone fitomboan'ny olona isan'andro. Mifanohitra amin'izany kosa, ny olon-dehibe salama dia manome ny salan'isa isan'andro momba ny 400μg.
Manamarina izany fa ny HGH dia ambony amin'ny fiandohan'ny taona ary mihetsiketsika tahaka ny iray izay mahatratra ny vanim-potoana volamena. Ny trangan-javatra dia nahatonga ireo mpikaroka hanadihady ny anjara asan'ny hormonina amin'ny fahanterana. Hitan'ny HGH fa manatanjaka sy manatsara ny rafi-pitondran-tena ny musculoskeletal, misy ny mety hisian'ny zava-mahadomelinafitondrana anti-aging.
Na dia eo aza ny tranga voajanahary, misy ny hormone mitombo amin'ny herin'ny zavamananaina, izay azo alaina ho toy ny fanafody fitsaboana ho an'ny fampandrosoana mahantra amin'ny ankizy.
1.1 Ny Hormone Hormone (HGH)
Tamin'ny faran'ny 50s, ireo mpikaroka ara-tsiantifika voalohany dia nametraka ny vokatry ny GH iray monopole amin'ny tovolahy 13-taona miaraka amin'ny hypopituitarism. Tatỳ aoriana, ireo manam-pahaizana ireo dia nitarika fianarana mitovy amin'ny olona dimy manana fahasamihafana samihafa, miaraka amin'ny tovolahy iray salama izay nanao ny asan'ny toerana.
Alohan'ny hamokarana hormone ho an'ny HGS, ny mpahay siansa dia handraraka ny hormonina hormonina avy amin'ny cadavers ary hampiasa azy ireny mba hanasarahana ny tsy fahampiana sy ny haavony. Na izany aza, io fanao io dia tonga tamin'ny fiafaràny tao amin'ny 1985 noho ny antony nandefasana ireo prôtea voatifitra sasany amin'ny mpitsoa-ponenana HGH. Nisy ny tranganà aretina nateraky ny aretina Creutzfeldt -Jakob, ary ny tranga misy ny homamiadan'ny homamiadana sy ny homamiadan'ny prostate teo amin'ireo olona izay nahazo tombony avy amin'ny hormone voan'ny cadaver.
Tamin'ny 1980, ny teknolojia ADN dia nitarika ho amin'ny famokarana ara-barotra ny hormonina biosynthetique an'ny olona. Nandritra ny taona maro dia nihalehibe ny mpanamboatra ny HGH, saingy nahazo tanana kely ihany ny FDA.
1.2 Ny Hetsi-panoheran'ny Hormone Miorim-paka ao amin'ny olombelona
Ny fitsaboana ara-pahasalaman'ny HGH dia mitranga ao anatin'ny hery manelanelana eo amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora mandritra ny andro. Amin'ny alina dia matory be ny valiny. Ny haavon-tseraseran'ny plasma dia eo anelanelan'ny 5 ng / mL sy 72ng / mL.
Rehefa mamoaka ny HGH ao amin'ny renirano ny glandana voalohany, dia mandeha amin'ny fomba roa izany; mivantana sy tsy mivantana.
Ao amin'ny rafitra mivantana, ny hormonina dia mamehy any amin'ny sela kininina mba hampisy valim-bolana ao amin'ny vatan'ny tsirairay. Amin'ny maha polypeptide azy, ny HGH dia tsy mety levona amin'ny tavy, noho izany, tsy azo sarahina amin'ny fonosana sela. Vokatr'izany dia mamatotra ireo mpandray anjara amin'ny sela kininina amin'ny alàlan'ny lalana MAPK / ERK. Ity rafitra ity dia mitarika amin'ny fitomboan'ny fisehoana, ary noho izany, ny fitomboan'ny sela, ny replication ary ny fahaterahana indray.
Ao amin'ny vokatr'izany indraindray, ny haavon'ny HGH dia mandrisika ny famotsorana ny tahan'ny fitomboan'ny insuline-1 (IGF-1) amin'ny alàlan'ny lalan-tsarimihetsika JAK-STAT. Eo amin'ny aty io fomba fiasa io ary ampiasaina amin'ny hepatocytes.
Ny fihenan'ny IGF-1 dia manana fiantraika ara-batana sy metabolika eo amin'ny vatana. Ohatra, manamora ny fampiasana proteinina ao amin'ny sela vavony izy io ary mampitombo ny fitomboan'ny taolana amin'ny alalan'ny fananganana ny cartilage. Ankoatr'izay, ny IGF-1 dia manatsara ny tsy fahampian'ny herisetra, manolotra karazana fiarovan-tena, ary miasa ho toy ny mpitsabo mpanohitra.
HGH noho ny faniriana Tsy vitan'ny mikarakara fampandrosoana amin'ny ankizy ihany, fa koa ny fantsom-batana, ny metabolismy, ny fiasan'ny atidoha, ary ny fitomboan'ny taovam-pisefoana.
1.3 HGH vs. Anabolic Steroids
Mety hanontany tena ianao hoe nahoana ny olon-drehetra dia toa tsy mampiasa ny fanafody bodybuilding HGH. Tazony ny afo satria hanazava aho hoe nahoana no tsy malaza ny zava-mahadomelina anabolic stimulant ao amin'ny indostria.
Voalohany indrindra, ny vidin'ny HGH dia manapaka ny banky. Ny gymnasts sy ny atleta fotsiny ihany no mety hitranga. Ny sisa amin'ny mponina dia mety hampidi-doza amin'ny fampiasana hormone hafa.
Ambonin'izany, ny ankamaroan'ny firenena dia nandràra ny fampiasana, ny famokarana ary ny fanapariahana ny HGH. Ho an'ny ohatra ohatra, any Etazonia, ny zava-mahadomelina dia azo avy amin'ny tena mpamatsy HGH raha misy prescription manan-kery.
Andao hiatrika izany. Mila fanehoan-kevitra avy hatrany isika isaky ny mandray fanafody. Tahaka ny manao fiasan-tsakafo vitsivitsy ary mandeha eny amin'ny fitaratra mandritra ny adiny iray eo ho eo, manantena ny hahita kibay matevina miaraka amin'ny famaritana azy efa efa.
Tsy toy ny steroids hafa, izay manome vokatra farafahakeliny herinandro, HGH alohan'ny andaniny Hisy enina ka hatramin'ny valo volana aorian'izay. Na dia miandry ny faharetanao aza ny fiandrasana lava dia maharitra ny tombony. Ity lafiny iray ity dia fitahiana amin'ny fanovana.
Farany, ny olon-drehetra dia toa trypanophobic, ary noho izany dia tsy hahatohitra isan'andro ny fisidinan'ny GH. Eny, tsy lozabe intsony izany satria ny fitoviana amin'ny endrika fitsaboana dia ahitana fitantanana am-bava.
1.4 Doping amin'ny HGH
Ny HGH dia maneho ireo toetra anabolic, izay nahatonga ny zava-mahadomelina ho an'ny fiarahamonina ara-panatanjahantena. Ny doping amin'ny hormone fitomboan'ny olombelona dia manomboka amin'ny 1980. Na izany aza, voarara ny fampiasana azy ny sampan-draharaha manohitra ny doping toy ny NCAA, WADA, ary IOC. Ireo atleta mihetsika manararaotra ity zava-mahadomelina ity dia tsy voaràra tanteraka amin'ny Lalao Olaimpika fa hiatrika fiampangana.
Na dia norarana aza ny doping amin'ny HGH tany am-piandohan'ny 80, dia nanjary nampiharina io lalàna io roapolo taona taty aoriana. Ny fahatarana dia vokatry ny fitsapana tsy azo antoka izay mety hanavaka ny hormonina endogenous sy exogenous olombelona. Raha ny marina dia samy manana molekiola mitovy amin'ny molekiola mitovy amin'ny fiantraikan'ny tosi-drà ny roa amin'izy ireo.
Taorian'ny fandinihan'ny urine tsy nahitana ny HGH tao amin'ny vatany, dia nisy mpikaroka mpikaroka nanao dingam-pahaizana tamin'ny fanandramana fitsapana ra. Tao amin'ny 2004, WADA nanadihady ny Lalao Olympika tany Gresy. Ity fomba fitsaboana HGH ity dia ampiasaina hatramin'izao.
2. Hormonal Growth Hormone (HGH) fampiharana
2.1 HGH ho an'ny Bodybuilding
Ny bodybuilder tsirairay dia manonofy ny mahazo ny hozatry ny foza ary koa ny fahaverezan'ny tavy fanampiny. Eny, ny ny hormone ho an'ny olombelona toy izany koa. Maro ny fitsapana momba ny fitsaboana no nanaporofo fa ny fampiasana ny HGH dia tsy vitan'ny hoe manaparitaka ny tazomoka ihany fa mandoro ihany koa ny fetsy. Ny zava-mahadomelina, tsy isalasalana fa fitsaboana tonga lafatra ny fahaverezan'ny fahavoan'ny marary.
Na dia tsy manohana fanambarana aza ny fikarohana fa ny GH dia manana andraikitra amin'ny fanatsarana ny fampihorohoroana, maro amin'ireo atleta no mino fa mahagaga. Ny fiantraikany amin'ny anaboley dia ny fampitomboana ny masin'ny fanahy, ny proteinina, ary ny hery entina. Ny zava-mahadomelina koa dia tompon'andraikitra amin'ny fanarenana haingana ao anatin'ny rafitry ny musculoskeletal.
Ny fitantanana ny HGH noho ny fahabetsahan'ny vozona dia manomboka ny fampidirana kolagna ao anatin'ny tendany sy ny hozakelin'ny skeleta. Ny hormone dia manome anao hery faratampony sy fahafahana miaritra fikarakarana ara-batana mafy. Ankoatra izany, ny fikarakarana amin'ny olona mitombo isa dia mihatsara ny lipolysis ary ny fivalanan-tsolika manimba manodidina ny kibo.
Ny fiantraikan'ny HGH amin'ny fahombiazan'ny atletika dia nanosika ny Masoivoho manerantany ho fanodinana an'izao tontolo izao mba hisioka azy io ho toy ny zavatra voarara. Noho izany dia tsy ara-dalàna ny fampiharana HGH amin'ny fanatanjahantena, na ao anaty na tsy misy fifaninanana ianao.
2.2 HGH ho an'ny Anti-Age
Ny fitrandrahana manerantany manerantany izay nanoratra momba ny fitsaboana HGH ho toy ny fitsaboana fanoherana dia nanjary latsa-danja.
Araka ny fikarohana navoaka tao amin'ny The Journal of Medicine (1990), ny antokom-pinoana dia nanamarika ny fitomboan'ny taolana sy ny hozatry ny fo. Ny mpikaroka dia nanamarika fa ireo fanatsarana ireo dia mifanohitra amin'ny zavatra andrasana amin'ny olon-dehibe 60 sy ambony. Satria tsy tao anatin'ny tanjona ara-pitsaboana ny fanamarihana, ny manam-pahaizana dia tsy nanova ny fahombiazan'ny GH ho fanafody fanoherana ny fahanterana.
Tao amin'ny 2007, iray hafa ny fitsapana olona ho an'ny olon-dehibe salama no nanamarika fa ny fampiasana HGH dia nampitombo ny isan'ny vozon'ny vondron'ny mpianatra. Ankoatra izany, nisy ihany koa ny fihenan'ny tavy ao amin'ny vatana amin'ny ankapobeny 4.5 pounds.
Io hormonina hafahafa io dia tsy hoe hampitombo ny tombon-tsoan'ny olona fotsiny, fa koa ny fiakaran'ny fatran'ny fifandraisana. Ny hantsana mafy sy mafy dia miteraka tarehin'ny tanora. Mbola tsy voaporofo izany HGH anti-aging dia miova ny fahanterana, saingy miharihary fa mihena ny fitsaboana izay efa antitra.
2.3 HGH noho ny fampiasana fitsaboana
Ny FDA dia nandamina ny fampiasana ny hormone ho an'ny Human Growth amin'ny fitomboan'ny fahasalamana samihafa.
Ny olon-dehibe amin'ny tsy fahasalaman'ny HGH dia mampiasa ny hormone amin'ny synthétique ho fitsaboana fanolo. Ny fanaraha-maso ireo marary ireo dia nanaporofo ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina amin'ny fampihenana ny fatin-kibo ary ny fananganana marefo. Ankoatr'izany, mampitombo ny herin'ny taolam-paty, manodinkodina ny fototarazon'ny rarin-tsaina, ary manatsara ny lipidin'ny lipid.
Ny HGH noho ny fahazoan'ny voanjo dia mahasoa amin'ny fitsaboana ny haavony fohy, izay mety na mety tsy nateraky ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo. Raiso, ohatra, ny aretin'i Prader-Willi, ny syndrome Turner, ny famerana ny fitomboan'ny atidoha, ary ny tsy fahombiazan'ny aretina dia mitantana ny GH. Amin'ireny tranga ireny, matetika dia avo ny doka mba hampihena ny fampodiana an-tanindrazana sy ny fizotran'ny fanasitranana.
Ity hormonina ity koa dia fanafody fitsaboana ho an'ireo marary manana toe-pahasalamana mandripaka toy ny VIH / SIDA.
Ankoatr'izay, ny fitantanana ny hormone mitombo amin'ny olombelona dia manampy amin'ny fitomboan'ny toe-tsaina mampihetsi-po sy ara-tsaina ary ara-tsaina. Ny vokatry ny tsy fahampian'ny GH dia ny fahaketrahana. Na izany aza, ny fitsaboana an'io fitsaboana io dia fanafody azo antoka.
2.4 GH ho an'ny fambolena indostrialy
Ny fampiharana ny hormonina mitombo ao amin'ny toeram-pambolena dia azo zaraina any Etazonia. Amin'ity orinasa ity, ny GH dia ampiasaina hampitomboana ny famokarana ronono sy henan'omby.
3. Handrindra ny homamiadan'ny olombelona
Na dia tsy mpankafy gym aza ianao dia hahatonga anao hitovy amin'ny iray ny HGH. Ny hormone dia mampitombo ny herin'ny proteinina, izay tompon'andraikitra amin'ny tombony hozatra.
Tsy toy ny fampiasana steroïde, ny fananana HGH dia manana tombony maharitra amin'ny mpampiasa. Raha vantany vao vita ny famaranana, dia tsy ilaina ny fitsaboana fitsaboana posto mba hanapahana ny balan'ny hormona. Ny anton'izany dia ny fitehirizana ireo vatom-panafody. Tsy isalasalana fa ny mpampiasa AAS dia mijanona amin'ny hormone mitombo mba hampitombo ny vokatra.
Ny fahombiazan'ny HGH amin'ny fahazoana tombontsoa dia nitarika azy ho nekena ho fanafody fitsaboana ho an'ny fahasitranana ho an'ny olona miaina miaraka amin'ny VIH / SIDA.
HGH fananganana anti-aging dia hahatonga ny hozanao ho toy ny an'ny 20 taona-taona. Tsy hampitombo ny isan'ny musculoskeletal fotsiny ny zava-mahadomelina, fa mahatonga azy ireo mafy, mafy, ary tanora koa.
Amin'ny taon-taonany dia mihena ny hozatra rehefa mihena ny isan'ny taolana. Na izany aza dia nisy fianarana navoaka tao Ny gazety Journal of Medicine (anglisy) dia nanaporofo fa ny hormona dia nitarika ho amin'ny fitomboan'ny haben'ny hozatra sy ny hasarobidin'ny taolana eo amin'ireo zokiolona.
Ankoatra izany, ny dokotera sasany any Etazonia dia manolotra ny HGH amin'ny zokiolona ho fitaovana hanatsarana ny fahaizany.
HGH for levitra dia manala ny hydrolysis of triglycerides amin'ny asidra maitso maitso sy glycerol. Amin'ny alàlan'ny rafitra dia lasa tsy misy rano ny tavy fanampiny, izay mora levona ny rafitra. Ankoatra izany, ny hormone dia mampihena ny fahatsapana ny vatana amin'ny insuline. Noho izany antony izany, ny fitsaboana dia natao ho an'ny olon-dehibe matavy sy be loatra. Averagely, ny iray dia ho very dimy kilao amin'ny fihodinana HGH tokana.
Ny fandinihana dia mampiseho fa ny olon-dehibe matavy dia manana hormone kely ambany ho an'ny olombelona raha oharina amin'ny anton'izany. Ity fikarohana ity dia namela mpahay siansa nieritreritra fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahavoan'ny fahavoazana ny fitantanana HGH.
Amin'ny faran'ny vanim-potoana manontolo, mpampiasa iray dia mety ho very ny 14% amin'ny tavy manontolo. Eny, mihatra io tarehimarika io raha toa ianao ka tsy mihinana na misasatra. Ireo izay te handoro ny lanjany dia afaka manoratra fitondra-tena.
♦ Tombo kokoa ny torimaso
HGH dia fitsaboana matory tsara. Raha hitanao fa sarotra ny hianjera na matory, dia azonao atao ny manome azy. Rehefa manana olana ianao amin'ny fanangonana ny sivinjina efapolo vokatry ny vokatry ny steroide anabolic, tokony hijeranao ity hormonina ity ao anatin'ny tsingerinao.
Ny fanafahana ny hormone fitomboan'ny olombelona dia tsara indrindra amin'ny fanombohan'ny torimaso lalina. Ny fandoroana ny menaka mamatonalina, mijanona antenaina, na miasa amin'ny alina dia manelingelina ny asan'ny pitipoa. Vokatr'izany dia hitombo ny fihenan'ny plasma HGH.
♦ Fomba fitantanana samihafa
Na ny fomba fitantanana amin'ny hGH aza dia amin'ny alalan'ny fampidirana, misy endrika hafa toy ny pilina sy ny ranomandry.
Ny dokotera sy ny matihanina dia manoro hevitra amin'ny fampiasana ny voambolam-bolo voalohany. Na izany aza, misy olona mahita izany fomba izany ho lafo. Ankoatr'izay, tsy ny tsirairay no manana toerana malefaka ho an'ny fanjifana tsindrona isan'andro. Ny fampidirana HGH dia manolotra vokatra mahatalanjona, saingy mitohy ny fisehoan-javatra ratsy kokoa noho ny fomba hafa entina entina.
Na izany aza, rehefa maka sary ny soso-kevitrao, dia tokony hipetraka amin'ny safidy subcutaneous ianao. Ny antony dia hoe tsy dia mampangirifiry loatra amin'ny fahafaha-maivana avo lenta kokoa noho ny fampidirana intra-muscular.
Raha mandeha mora ianao, dia afaka mividy pills. Raha ny zava-drehetra dia mihelina ihany io hormonina hafahafa io, na inona na inona ianao na tsia, na maka ny takelaka. Ny zavatra iray mazava dia ny fahatsapana ny voka-bary dia mora sy mora kokoa. Ankoatra izany, ny vidin'ny HGH dia sariaka rehefa mividy fanafody am-bava.
♦ Manatsara ny fizotry ny fahasitranana
Ny hagoakan'ny Exogenous dia mampihena ny fomba fanasitranana ny tazomoka sy ny taolam-paty. Noho izany antony izany, ny dokotera dia manoro azy io ho fitsaboana raha sendra mirehitra na ratra mafy.
Amin'ny tranga iray, ny HGH dia ny mampirisika ny fanavaozana ny sela any amin'ny faritra voakasika. Manamora ny fametrahana ny collagène eo amin'ny ratra, noho izany, ny fampihenana ny fotoana fanarenana.
♦ Manatsara ny fitomboana
Tany am-boalohany, ny mpikaroka dia nanamboatra ny hormonina mitombo amin'ny fiterahana mba hitantana ny zana-tohatra fohy amin'ny tanora. Rehefa tratran'ny tanora ny fikarakarana, mbola mihamitombo ny vatany, dia tsy isalasalana fa hampidiriny kely ny halavany. Ny zaza mahazo ny fitsaboana dia afaka mahazo ny 7 "ao anatin'ny latsaky ny dimy taona.
Ny HGH dia manomboka ny fitomboan'ny saika sy ny taova rehetra, afa-tsy ny atidoha. Ho an'ny tanora, ny hormone dia mampirisika ny fivoaran'ny taolana sy ny cartilages amin'ny fiterahana ny taolam-paty sy ny chondrozy. Ankoatra izany, misy ny tanana manakana ny apoptose na fahafatesana cell.
♦ Manamora ny fahombiazana
Inona no mahatonga ny HGH malaza amin'ny mpamboly bakteria, dia ny fahaizany mampiroborobo ny hery hery ary manatsara ny fahombiazany. Na ny mpikaroka sasany aza tsy mividy an'ity zava-misy ity, dia nisy ny fikarohana hafa nanampy azy. Raha ny tena marina, nahoana ny anti-doping agents no mandrara ny fampiharana HGH amin'ny fanatanjahantena raha tsy manana tanana amin'ny fanatsarana ny fampiharana?
Ho an'ny gymnasts, ny fampiasana HGH dia hampitombo ny fiaretanao sy ny fiaretanao. Farafaharatsiny ianao dia hametraka fanazaran-tena mafy sy herim-po mahery vaika. Ankoatra izany, ny fampiasana ny hormone dia hanatsara ny fampiasana ny fampiasana azy rehefa manatsara ny fahaizanao ara-batana satria tsy ho reraka haingana ianao.
♦ Ny fihenan'ny Bad Cholesterol
Ny kolesterola avo lenta dia fototry ny aretim-pianakaviana. Na dia izany aza, ny fihenan'ny HGH dia manatsara ny vokatra, izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny takelaka arterial.
♦ Manatsara ny fifehezana
Ny hormonenan'ny fitomboan'ny olombelona dia miantraika amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny toetran'ny fitombon'ny tosidra 1. Amin'ny alàlan'ny fomba fanehoana ny tyrosine kinase-mediated, ny IGF-1 dia mamela ny phosphorylation ny proteinina isan-karazany ao amin'ny cellule peripheral. Amin'ny farany, hisy ny fiakaran'ny metabolisma sy ny fihenan'ny savorovoro.
Ny asan'ny metabolika fototra amin'ny sela dia mitovy amin'ny amino asin-tsakafo sy ny proteinina. Ankoatra izany, ny asa HGH dia ny manatsara ny gluconeogenesis amin'ny fampiroboroboana ny hyperglycemia.
♦ Manitsy ny dysfunite erectile
Ny HGH dia mandray anjara mavitrika amin'ny fahasalamana ara-pananahana. Ny tsy fahampian-tsakany dia mitarika ny fahamaotiana amin'ny fahatanorana sy ny fihenan'ny asa eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny olon-dehibe.
Ny olona mijaly noho ny tsy fahampian-tsakafo dia mety ho ambany noho ny GH. Ny fitantanana ny hormone dia hanampy amin'ny fanatsarana ny famokarana testosterone, noho izany, ny fampitomboana ny isan'ny sira.
♦ Fampiasana ara-pahasalamana
HGH dia fanafody fitsaboana FDA ho an'ny toe-javatra samihafa;
◦ Miala sasatra
◦ Famaritana fohy
◦ Ny aretina Prader-Willi
◦ Ny tsy fahombiazana amin'ny renena
◦ Ny aretina tsinain'ny marary
◦ Syndrome mpiantoka
◦ GH tsy ampy
◦ Burns sy ratra
4. Ahoana ny fiasan'ny HGH amin'ny vatan'olombelona?
Io hormona hafahafa io dia manosika ny lahy sy ny vavy. Samy manoratra ny valin'ny HGH izay mitovy.
Mahasosotra ny vehivavy noho ny antony roa. Ny hormone dia voajanahary amin'ny fomba fiasan'olombelona. Rehefa nampiasa ny teknolojia ADN ny mpikaroka mba hampandrosoana ny endritsoratra, dia azony antoka fa mitovy amin'ny HGH ny endriky ny molecular. Vokatr'izany dia mamaly tsara ny fitantanany ny vatana.
Ankoatra izany, ity fanampiny ity dia tsy steroid. Eny, anabolika izany, saingy izany rehetra izany.
▲ Ao amin'ny Lehilahy
Ny zavatra iray mamaritra ny lehilahy dia ny herin'ny tebiteby. Noho izany, raha miharatsy ny fahombiazanao dia ho faly an-tsehatra ny HGH. Ny hormone dia champa iray amin'ny fanomezana anao ny fihenana amin'ny fanaovana asa fikarakarana ara-batana. Amin'ny lafiny iray, ny hozatry ny taolana sy ny taolana dia manasitrana anao manatsara ny fiaretanao, indrindra mandritra ny fampiofanana mafy.
Miasa hanatsara ny fiainanao ny HGH. Raha manana tantaram-pahavoazana, tsy zatra, na famokarana testosterone ambany ianao, dia hiditra ny hormonina hanoherana ny vokatr'izany. Ambonin'izany, manampy amin'ny fanentanana ny fihetseham-po izy io rehefa mihamangatsiaka ny fihetseham-po.
Ny zavatra iray hafa, ny hormone mitombo amin'ny olombelona dia mampitombo ny maha-tsiambaratelo ny olona iray. Manasaraka ny ankamaroan'ny asan'ny atidoha izany, anisan'izany ny fahatsiarovana, ny fisainana, ny fahalalana, ary ny fifantohana.
▲ Ao amin'ny vehivavy
Ny vehivavy dia mikarakara bebe kokoa ny endriny noho ny zavatra hafa rehetra. Noho izany, mety tsy ho tsara aminao izany raha manomboka mitsikera be loatra ny kibo, mibontsina ny hoditra, menatra, hoditra maina, na manify volo. Fanamarihana, nanapa-kevitra aho fa hanapaka ny volom-bozaka ao amin'ny lisitra satria marika fahendreny ary ny ankabeazan'ny olona no mahita azy io mahafinaritra.
HGH ho an'ny vehivavy mampirisika ny fanavaozana ny sela sy ny fananganana collagen sy elastin, izay tompon'andraikitra amin'ny hoditra tanora. Amin'io tranga io, ny hormone dia miady amin'ny fikorontanan'ny taolana, ny taonany ary ny ketrona. Rehefa mihamatanjaka ny hozanao dia toy izany koa ny hoditrao dia lasa mafy orina. Ankoatr'izay, tsy ho vaky volo intsony ianao raha toa ny HGH mameno sy manatanjaka ny zana-tsipika.
Tianay daholo izany endrika androany izany. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny GH dia mety hitarika amin'ny fametrahana ny alikaola manodidina ny faritra mamohehatra na manify. Ny fitantanana ny hormonenan'ny fitomboan'ny olombelona dia manampy amin'ny fanamorana ny lipolysis.
Raha tsy dia miraharaha ny endrikao sy ny bikanao ianao, dia tokony handray HGH noho ny fahasalamanao foza. Ny fahazoana mavesatra sy ny matavy loatra manodidina ny kibo dia fototry ny aretin'ny fo.
Ny HGH ho an'ny vehivavy ihany koa dia miasa mba hanatsarana ny fiarovana sy hanatsarana ny fiarahan'ny lahy sy vavy. Tsy toy ny steroide anabolic, ny HGH dia tsy mamela ny vokatra virilization. Na izany aza dia tokony ho ambany dia ambany araka izay azo atao amin'ny vehivavy ny doka.
5. Hormone Hormone (HGH) ampiasaina: Hery
Ny fampiasana hormonina biosynthetique dia miankina amin'ny tanjona tianao hotratrarina. Ny dosage sy ny fihodinana dia miova arakaraky ny fampiasanao izany ho fanampim-bazana na as a anti-aging agent. Ankoatra izany, ny fahasamihafana amin'ny areti-mifindra dia ho samy hafa noho ny an'ny haavony.
Raiso, ohatra; Mety ho avo dia avo ny taham-pahasalamana raha oharina amin'ny mpampiasa izay te-hankafy ny fambolena na ny HGH fanoherana ny fahanterana. Na izany aza, ny dokotera dia mampiasa fitsaboana fohy mandritra ny 4 ka hatramin'ny enina herinandro.
5.1 HGH Injection vs. Fomba hafa amin'ny fitantanana
Ny fampidirana ny HGH dia ny fomba fampitaovana voalohany indrindra alohan'ny fampidirana ireo pilina am-bava sy ny tsiranoka sublingual. Ny endriky ny haino aman-jery dia azo atokisana satria manome ny vokatra HGH tsara indrindra izy ireo. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa izy ireo no hany fanafody mety amin'ny tsena.
Raha te hanaisotra tavy be loatra ianao, dia manapaha HGH marina ao amin'io faritra io. Ny fandefasana ny hormonina amin'ny tranokala iray manokana dia manamora ny fahaverezan'ny fatotra eo an-toerana.
Afaka mandamina ianao HGH injection na intramuscularly na fanoherana. Amin'ireto roa ireto, ny fihenan'ny biôgrafia dia ambony kokoa noho ny teo aloha. Ny antsasaky ny HGH amin'ny injections amin'ny intramuscular sy subcutaneous dia ny ora 3.4 sy 0.36.
Ny fotoana tsara indrindra hampidirana ny HGH dia aorian'ny sakafo farany rehefa efa matory ianao. Azonao atao ny mikarakara ny faritra ao an-kibo, ny vavony, ny feny, na ny dindo. Tohizo ny manova ireo tranonkala mba tsy hitera-doza na fanaintainana foana.
Ny tsy fahampian'ny endrika HGH dia mampihorohoro azy ireo, indrindra fa ny ankizy sy ny zatovo. Rehefa mieritreritra fa tsy maintsy mampiditra ny fanafody isan'andro ianao, ny olona sasany dia hanaiky ny dosage noho ny trypanophobia.
5.2 HGH Cycle: Miaraka Aminao ve ny Steroid Anabolic?
Ny zavatra tsara indrindra momba ny HGH dia ny azonao ampiasaina amin'ny endriny hafa amin'ny fambolena iray na hampiasana azy amin'ny hafa anabolic steroids. Ny antony mahatonga ny olona hiantehitra amin'ny fanafody hafa amin'ny famakiana sy ny tsingerim-bolo dia ny manatsara ny vokatra rehefa manimba ny vokatra hafa.
Raha toa ianao ka tsy atleta mavitrika na mpandidy bodista iray, dia mety tsy ilaina ny fananganana HGH miaraka amin'ny steroid anabolic. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mandray ny kely indrindra amin'ny 2IU amin'ny 12 hatramin'ny herinandro 16.
5.3 HGH Cycle Guide
Raha tanjona ny hampitombo ny fahaizanao dia ny dosage mahazatra isan'andro dia eo anelanelan'ny 2IU sy 8IU. Ohatra, rehefa maka HGH ianao amin'ny dingana fametram-pokontany, dia tokony ho ambany noho ny 2IU amin'ny 4IU ny doka. Ity fanafody ity dia anisan'ireo zava-mahadomelina manatsara ny fampihetseham-pahaizana, izay azo ampiasaina amin'ny vehivavy. Na izany aza, ny HGH ho an'ny vehivavy dia mitaky ny halalin'ny dossier ny olona iray raisina.
Ny fitsaboana HGH dia afaka manomboka amin'ny herinandro 16. Raha ela kokoa ianao vao miady, dia mety hisy vokany ratsy eo aminao. Ireo izay mitaky mihoatra ny 2IU isan'andro dia mety hisafidy kely fotsiny mihoatra ny fe-potoana 16-herinandro. Na izany aza, ny olona izay mampiasa mihoatra noho ny 4IU dia tokony hifanaraka amin'io fotoana io fa tsy hiafara amin'ny fanafihan'ny acromegaly.
Hanombohana ny tsingerinao, diniho ny fitantanana ny injeniera tokana amin'ny dosage an'ny 2IU ao anatin'ny efatra herinandro voalohany. Aorian'izay, afaka mampitombo ny fepetra andavanandro ianao ary manasaraka izany amin'ny doka roa samihafa. Ampiasao tsara ny faran'ny herinandro mandritra ny roapolo ambin 'ny herinandro ary manomeza roa na efatra herinandro ianao, alohan'ny hanombohan'ny dingana manaraka.
Goal Daily Dosage (Lehilahy) Daily Dosage (Vehivavy)
Fampiharana mikasika ny fitsaboana 8IU - 16IU 6IU - 12IU
Meny fitetezana 4IU - 8IU 2IU - 4IU
Performance 2IU - 4IU 1IU - 2IU
Anti-fahanterana 1IU - 2IU 0.5IU - 1IU
Amin'ny fotoan'ny HGH, tokony hanara-maso ny fiovana ara-batana eo amin'ny vatanao ianao. Na dia tsy fahita firy aza, ny sasany dia hiaina ny tosidra ambony. Na izany aza, ity vokatra ity dia mihamitombo eo amin'ireo mpampiasa mandray dosie avo. Raha toa ka mitsambikina ny BP anao, ataovy izay hampidina ny doka.
Ankoatra izany, tokony hanamarina ny famantarana ny acromegaly ianao. Raha tsy mifandray intsony ny fonon-tananao na ny kiraronao dia lasa kely ho an'ny tongotrao, mialà amin'ny hormonina. Ireo soritr'aretina ireo dia fahazavana mena mampitaintaina ny fon'izy ireo.
5.4 The HGH Stacking
Ao anatin'ilay dingana famaranana, ny safidy fametrahana anao dia ahitana, fa tsy voafetra ihany, Anavar sy Primobolan. Raha efa misakafo ianao ary manao fanatanjahan-tena tsy tapaka dia miantoka ny hampihenana ny HGH cycle ho an'ny 10 herinandro farafahakeliny. Ny fanagadrana ny vanim-potoana dia hahatonga anao ho very ny kaloria amin'ny risika hafa amin'ny fahasalamana.
Ho an'ny bulking, azonao atao ny mampisaraka azy amin'ny Trenbolone Enanthate na ny Deca Durabolin. Ny hafainganam-pandaharana hafa dia mampiditra testosterone sy Sustanon-250.
Ny maha-zava-dehibe ny fikambanan'ity hormonina ity ao amin'ny tobim-pahasalamanao dia ny maha-zava-dehibe azy. Farafaharatsiny, ny tombontsoa HGH dia hihazakazaka raha ny tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiranoka dia ho malemy sy tsy dia mafy. Ao amin'ny tabilao, ataovy azo antoka ny fampiasana ny hormones ho an'ny hormone.
5.5 HGH amin'ny Post Cycle Therapy
Alohan'ny hidiran'ny tsingerin'ny karazam-panafody tandindomin-doza dia miantoka ny fitantanana ny tahan'ny kely indrindra ao anatin'ny efatra herinandro farany. Raha manao izany ianao, dia hihena ny habetsahan'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana mba hialana amin'ny vanim-potoana fanarenana.
fampidirana HGH ao amin'ny PCT dia mitazona ny fahazoana tombon-tsoanao rehefa mijanona ny fisorohana rano azo atao, izay mitranga rehefa vita ny fitsaboana. Na izany aza, raha tianao ny hankafy ny tombontsoa anabolika amin'ity hormonina hafahafa ity, dia ataovy izay haharetan'ny sikileo mandritra ny valo sy roapolo herinandro.
Ho an'ny vokatra tsara kokoa, azonao atao ny mampifandray HGH amin'ny fitsaboana anti-estrogen hafa toy ny Nolvadex sy Clomid.
6. HGH Results: Talohan'io
Ny vokatry ny HGH dia tsy miseho tampoka tampoka. Na dia mihetsika amin'ny paikady aza izy, dia azo antoka ny vokatra azo. Ny voalohany indrindra no hanombohana ny fanoratana ny fanovana dia ny volana voalohan'ny fitantanana. Na izany aza, ny vokatra tsara dia tonga mandondona amin'ny faran'ny enim-bolana.
Mandritra ny androm-pikatrohanao, dia tsy tokony hiandrandra fotsiny ny vokatra ianao, fa hanaraka ny fandrosoanao ara-batana ihany koa. Raiso, ohatra, ny antontan-taratasy momba ny vokatry ny HGH alohan'ny aorian'ny fampidirana ilay tsimokaretina dia hampitandrina anao raha toa ka mampivelatra ny toetranao ratsy ianao.
Mba hanamafisana ny fahombiazan'ny hormone mitombo amin'ny olombelona, ​​dia handeha anao aho amin'ny alalan'ny fandalinana sasantsasany momba ny fitsaboana mahomby. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny 1996, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny HGH dia mampitombo ny fahasitranana amin'ny lehilahy taona mihoatra ny 69 taona. Ny lohahevitra nalaina tamin'io hormonina io dia nitombo ny fitomboan'ny kolagna raha oharina amin'ny plasbo.
Rudman sy ireo mpiara-miasa aminy dia nanao fanadihadiana ny vokatry ny HGH amin'ny lehilahy eo anelanelan'ny 61 sy 81 taona nandritra ny enim-bolana. Tamin'ny famaranana dia hitany fa misy ny fihenan-tsibiby marefo amin'ny 8.8%, 1.6% lanjan'ny taolana, ary ny fihenan'ny tavy 14.4. Ity fikarohana ity dia nahitana zava-baovao mahatsiravina, izay nahitana ny fampiasana ny HGH ho toy ny mpitsabo mpanohitra.
Ny fianarana mikendry ireo niharan-doza 24 efa antitra teo anelanelan'ny 22 sy ny 46 taona dia nahafinaritra ny olom-banany noho ny tombontsoa telo hgh tamin'ny fiaramanidina 12 iray isan-kerinandro. Ny fitsaboana dia nitarika ho amin'ny fihenan'ny tavy mipararetra, ny fitomboan'ny volon-koditra, ny fifandanjana azota ary ny famokarana IGF-1. Ny fehin-kevitra dia mifototra amin'ny hoe HGH na alohan'ny fananganana governemanta dia misy fiantraikany amin'ny vatan'ny olombelona.
Fomba hanatsarana ny valin'ny HGH
▪ Mahaiza matory
Ny avoakan'ny HGH dia avoaka rehefa matory ianao. Noho izany dia andramo aloha ny hatory ary hatory mandritra ny fito na valo ora farafahakeliny. Raha manao ny fiovan'ny alina ianao dia miantoka ny hananganana ny tsingerim-pifamoivoizana.
Amin'ny fahatelon'ny hatsiaka, dia manatsara fahazarana tsara izay hampitomboanao ny torimaso. Ohatra, alohan'ny hialana amin'ny fandriana, dia azonao atao ny misoroka ny fametrahana loko manga amin'ny famakiana boky. Miala amin'ny kafeinina aorian'ny filentehan'ny masoandro ihany koa.
▪ Jereo ny sakafo
Tokony hametra ny siramamy siramamy na ny voam-bary ianao. Ireo loharanon-kafatra roa ireo dia manandratra ny faritry ny insuline ary manamora ny fahazoana mavesatra. Alaharo amin'ny kalôria ary hanjary fofona matavy. Raha manana nify mamy ianao, dia miezaha hiasa amin'izany.
▪ Manaova fanatanjahantena tsy tapaka
Ny fampiofanana intensive dia manampy amin'ny fanatsarana ny famokarana hormonina amin'ny fitomboan'ny olombelona. Ataovy azo antoka fa mihoatra lavitra ny farafahakelin'ny laktate ny haavon'ny fanatontosana. Ny fampiasana rehefa mandray ny fanafody hgh synthetique dia hampihena ny fahaverezan'ny fahavoazana, ny hery misintona, ary ny fahasambaran'ny olona iray.
▪ Araho ny fahantrana
Mandritra ny hetsika indirect indirect, ny HGH dia mampirisika ny fampidirana ny IGF-1 amin'ny hepatocytes. Na izany aza, io fiasa ara-batana io dia mety tsy hitranga raha misy aretina ao aminao. Manimba ny asan'ny HGH sy ny IGF-1 ny fanasitranana ity taova ity amin'ny fiverimberenan'ny asa mahantra sy ny aretina mifandraika amin'izany.
7. Inona no mihatra raha be loatra ny hormone?
Ny hypothalamus dia mifehy ny fitsipika HGH. Ity ampahany amin'ny atidoha ity dia mamoaka ny famotsorana ny hormone hormone (GHRH) ary ny hormone-hidy hormone (GHIH). Ireo roa ireo peptides dia fantatra amin'ny anarana hoe somatocrinine sy somatostatin, raha ny marina.
Amin'ny toe-javatra izay GHRH ary ny GHIH dia tsy afaka mifandanja amin'ny vatan'olombelona, ​​ny olona dia hiafara amin'ny hormone mitombo na kely loatra.
7.1 Toeram-pitsaboana goavana loatra (GH)
Miseho amin'ny fomba samihafa ny GH mihoatra. Ny tsy fetezana mahazatra indrindra dia mitranga rehefa misy tsiranoka, izay misy sela somatotrophic, dia mitambatra ao amin'ny pitipoalitera. Na dia mitombo aza ny fihenan-tsofina amin'ny diabeta, dia mitombo hatrany ny fandrosoana, mitarika hatrany amin'ny famokarana HGH.
Ny adenomas GH-miafina dia miteraka tsy fahita any amin'ny fahazazana. Indray mandeha amin'ny volana manga, tanora mitongilana HGH dia hihaona amin'ny gigantisma japoney na fandrosoana tafahoatra. Na izany aza, dia misy fiantraikany amin'ny olon-dehibe ao amin'ny 50s na ny zokiny ny fitsaboana, ka mitarika amin'ny acromegaly.
Manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 21 taona, mitombo ny fitomboan'ny fitomboana rehefa mihamatroka ny teboka avoakan'ny epiphides. Raha misy ny HGH tafahoatra amin'ny fitiliana dia hitombo ny fitomboan'ny taolana. Ireo taova voakasika dia ahitana ny karandoha, ny tongotra, ny tanana, ny valanoranony ary ny boribory. Ny fahitana fa ny kiraronao, ny satroka, ny masoko, na ny fonon-tsela dia tsy mety intsony, tokony ho fanavakavahana.
Ny fahasamihafana eo amin'ny gigantisme sy ny acromegaly dia ny fisian'ny taloha tany am-boalohany talohan'ny fanakatonana ny epiphyses. Mifanohitra amin'izany, mihanaka ny acromegaly amin'ny olon-dehibe.
Mihira sy vokatry ny fanamarihan'ny GH
◦ Ny fahitana fahavoazana noho ny fanerena be loatra amin'ny tsiranoka
◦ Mihinàna tavy manodidina ny kibo
◦ Hihena ny kolesterola ratsy
◦ Valan-drongony mafy vokatry ny taolam-paty
◦ Famindrana sy fihenan'ny hormones hafa
◦ Ny hormone-binding globulin (SHBG)
◦ Ny soritr'aretina tavoahangin-tsolika
◦ fanoherana ny insuline
◦ Fampitomboana ny fifindran'ny voninkazo
◦ Saina kansera
Misy fomba telo samihafa amin'ny fitantanana adenôma HGH-miafina. Ny fomba ambaran'ny ankamaroany dia ny fanesorana ny fivoahana. Ankoatr'izany dia azo ampiasaina amin'ny fanafoanana ny fivontosana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny taratra. Amin'ny toe-javatra sasany, ny dokotera dia manondro antagonista somatostatin, izay manimba ny famokarana hormonina mitombo.
7.2 Toeram-ponenana kely kely kely (GH)
Miharatsy izany tsy fahita firy izany amin'ny fahazazana. Ny etiôlôjika dia mety hiteraka fihenana noho ny fahasimbana ara-pihetseham-po na ny faharatran'ny gripa. Amin'ny tranga vitsivitsy, G.-fahampiana dia vokatry ny fiovan'ny fototarazo ho an'ny sekretera tomponandraikitra sy ny fampidirana ny HGH.
Ny fihenan'ny famokarana ny HGH dia miankina be indrindra amin'ny Factile-Growth-Insulent-1 (IGF-1). Ohatra, rehefa tsy mahavita mamokatra IGF-1 ny atiny, dia hianjera ny halatra hormonina. Ankoatra izany, ny vatan'ny vatan'ny olona dia mety tsy ho resy lahatra amin'ny IGF-1. Ireo tranga rehetra ireo dia mitarika ny fihenan'ny Hormone Human Growth.
Ao amin'ny olon-dehibe, adenôma pituitary no fototry ny tsy fahampian'ny GH. Ny antony hafa dia mety ahitana ny fandidiana, ny radiotherapies, ny lozan-doha, na ny meningitis. Sarotra be ny mamantatra ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo amin'ny taonan'ny olon-dehibe. Na dia misy aza ny soritr'aretina mifandraika amin'izany, ny ankamaroan'ny olona dia hiteraka ny vokatra izay mahazatra ny fahanterana.
Famantarana sy fiantraikan'ny tsy fahampian'ny HGH
Ao anatin'ireo ankizy, kely loatra ny HGH no mitarika ireto manaraka ireto;
◦ Mitombo ny fihomboan'ny volo
◦ Loha ambony
◦ tsy hahomby
◦ Hatao amin'ny fahamaotinana na ny toetra ara-nofo faharoa
◦ Ny olon-dehibe dia mety hitranga manaraka izany;
◦ Ny hoditra maina
◦ Hihena ny tanjaka
◦ Mamelatra tebiteby
◦ Ny taolana malemy, izay mahatonga ny osteoporose
◦ Vao mainka mitombo
◦ Mangidy sy ketraka
◦ Fihetseham-po amin'ny kardia vokatry ny toilan'ny tosidra na ny dyslipidemia
◦ Miankina asa atao tsindrona
Ny marary amin'ny fihanaky ny HGH dia entina amin'ny hormonina mitaiza amin'ny olombelona. Farafaharatsiny, izy ireo no hany vondrona olona afaka miditra sy mandeha ara-dalàna miaraka amin'ny hormone toy ny mpitaingina kiraro.
8. HGH Side Effects: Misy Loza Amin'ny HGH Injection?
Ny HGH dia misy fiantraikany eo amin'ny tahan'ny dosage sy ny fomba fitsaboana zava-mahadomelina. Ohatra, ny fametrahana dosie avo sy cycles lava dia hampitombo ny fiantraikany ratsy. Na dia izany aza, tsy azo ampiharina izany raha ny fitsaboana dia miteraka alikaola, fohy, na tsy fahampian'ny GH. Ny fandinihana dia mampiseho fa na dia goavam-be aza ny fitsaboana ara-pahasalamana, dia tsy fahita firy ny vokany.
Ndeha hokaravasina amin'ny vokatry ny HGH;
▪ Fialana vaksiny
▪ Gripona HGH izay mety ho faty mandritra ny fotoana voafetra
▪ Ny aretin'andoha
▪ Mampijaly ny taolana sy ny hozatra ary ny taolana
▪ Zava-doza ny diabeta
▪ Harefo, tanana, tongotra, tongotra, ary fitaovam-piadiana
▪ Ny sendikà misy tavy
▪ Lymphoma an'i Hodgkin
▪ Vetivety ny tsindrona insuline
▪ Fampitomboana ny siramamy ao amin'ny rà
Na ny tompon'andraikitra HGH mampiasa, ny mpampiasa dia mbola mahatsapa ny ankamaroan'ireo soritr'aretina etsy ambony. Na izany aza, mitombo io loza io miaraka amin'ny fitomboan'ny dosage. Ny fiantraikany sasany, toy ny Diabetes Type II, ny fanaintainana ary ny fifandimbiasana, dia mihalefaka rehefa miala amin'ny fitsaboana ianao.
Ho an'ny hypothyroidism, azonao ampiasaina amin'ny Cytomel (T3). Ho an'ny tanjona ara-pahasalamana, ataovy azo antoka ny fampiasana siramamy maranitra mandritra ny fisidinana.
Raha tsy misy dokotera mametraka ny zava-mahadomelina dia aza alaina izany raha efa manana toe-pahasalamanao ambany. Ny HGH noho ny fahavoazan'ny ratra dia natao ho an'ireo mpampiasa voaaro.
Raha toa ianao ka tafiditra ao amin'ny lisitra etsy ambany dia ataovy izay hisorohana ny aretina biosynthetique toy ny areti-mandoza.
▪ Kanseran'ny marary.
Ity vondron'olona ity dia ahitana olona iray izay efa voan'ny kansera na mety hampidi-doza ny aretina. Ny mpikaroka dia manoro hevitra fa mety hampihena ny fitomboan'ny karazam-borona sasany ny HGH.
Ny HGH dia mety hanelingelina ny fomba fiasa ara-batana amin'ny valin'ny insuline.
Ny fianarana sasantsasany dia maneho ny fahombiazan'ny fihenanam-po amin'ny mpampiasa mitondra ny zava-mahadomelina.
▪ Patients with syndrome tunnel carpal
Mety hitera-doza io hormone io, satria misy fiantraikany mivantana amin'ny ligaments, tendons, ary ny kibony.
▪ fiakaran'ny tosidrà
Ny HGH dia manandratra ny tosidra.
9. 2019 Miorim-paka amin'ny fivontran-tsakafon'ny olombelona
Misy fomba roa azo antoka hahazoana ny hormonina biosynthetique ho an'ny olona. Mandeha miaraka amin'ny dokotera ianao na mividy HGH amin'ny magazay an-tserasera. Na dia misy mpivarotra eny an-dalambe aza mametraka azy io, ny fividianana azy ireo dia tokony ho farafaharatsiny indrindra satria mety ho fandrika ny fahafatesana.
Tsy ara-dalàna any Etazonia ny hGH raha tsy dokotera. Na dia izany aza, mpivarotra an-tserasera tsy miankina dia mifandray amin'ny famokarana sy fizarana ny hormone.
Mba handinihana ny mozika sy ny vokatra hosoka dia tokony hividy amin'ny tena marina ianao HGH mpamatsy, izay manome fanazavana amin'ny antsipirihany momba ny fitambarana. Tokony ho fantatrao bebe kokoa momba ilay mpivarotra sy ny mijery ny vokatra avy amin'ny mpampiasa.
Ireto ny sasany amin'ireo mpivarotra tsara indrindra amin'ny varotra;
Ity vokatra ity dia tsy malaza amin'ny tsy misy. Amin'ny tena heviny, dia ny HGH no mividy izany.
Ny HGH-X2 dia mampitombo ny fitomboan'ny taovam-pananahana, mampitombo ny metabolisma, ary manatsara ny fahombiazan'ny mpampiasa. Ankoatra izany, azonao atao ny manapa-kevitra raha tadiavinao ny tavy na ny fitomboan'ny firaisana ara-nofo. Tahaka ny Hogen endogenous, ity fanampiny ity dia miteraka fanavaozana ny sela, izay tena ilaina amin'ny fampivoarana tsara.
Ny HGH-X2 dia misy amin'ny fonosana pilina. Ny fanesorana azy dia hampitombo sy hampiroborobo ny famotsorana ny hormone fitomboan'ny olombelona. Afaka maka kapsila roa isan'andro ianao amin'ny andro manaraka 15 na manao dingana telo dose mandritra ny folo andro.
Ireo singa manan-danja mamorona HGH-X2 dia ahitana Maca, Hawthorn Berry, L-Arginine, ary Velvet Beans.
Ity vokatra ity dia ahitana ny asidra amino rehetra izay manentana ny famotsorana ny HGH. Ny anjara asany tsirairay dia manana anjara andraikitra amin'ny famerenana ny fahanterana, ny fanatrehana ny hozatra, ny fampiroboroboana ny fampandrosoana, na ny fampihenana ny metabolisma.
Ohatra, ny L-Arginine, izay manana taha ambony indrindra isaky ny serivisy, dia mahasoa amin'ny fihazonana ny hozatra matanjaka nefa marefo. Amin'ny lafiny iray, ny L-Glutamine sy ny L-Tyrosine dia manatsara ny fahalalana ary mifehy ny metabolismy.
Ny asymine amino hafa hita ao GenF20 dia ahitana L-valine, L-Glycine, L-Ornithine, ary L-Lysine. Amin'ny servisy tokana, tsy ho andrinao ny tsiron'ny Deer Antler Velvet, Astragalus Root Extract, GABA, phosphatidylcholine, colostrum, ary GTF chromium.
Ireo GenF20 dia mibebaka fa manomboka mahita ny valiny izy ireo aorian'ny volana iray amin'ny fitantanana ny fanampiana. Ny famintinana ny fanadihadian'ny mpanjifa dia mitodika manodidina ny hoditra tsy misy pentina, ny fihenan-tsakafo, ny voka-bolana, ny faharetana ary ny torimaso tsaratsara kokoa.
Ity famenon-tsakafo ity dia anisan'ny HGH tranainy indrindra azo amidy eny an-tsena. Raha tsy afaka miteraka fanaintainana isan'andro ianao ary ny vokany dia mila manandrana GenFX ianao.
Ny asany voalohany dia ny hampiroborobo ny famokarana hormonina endogenous. Noho izany, dia mitarika amin'ny fiterahana indray izy io. Mandritra izany fotoana izany, ny faharetan'ny GenFX dia mampihena ny fizotran'ny fahanterana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hoditrao ka tsy misy manelingelina na mikorontana.
Io vokatra io dia ahitana karazana amino asin-tsakafo 12. Misy tavoahangy tokana ahitana takelaka 30 ao anaty kapoaka roa kapila iray isan'andro. Amin'ny maha-ampiana voa-janahary azy, ny GenFX dia tsy misy fiantraikany amin'ny tsimok'aretin'ny HGH.
9.1 Ny fitsapana amin'ny ra: Ahoana no ahafantaranao sa ny tsara indrindra aminao?
Ny hormone tena mahomby amin'ny fitomboan'ny olombelona dia tokony hitovy amin'ny sela voajanahary voajanahary toy ny an'ny hGH voa voajanahary ao amin'ny toeram-pitsaboana. Na izany aza, tsy afaka manandrana na oviana na oviana ny maha-ara-dalàna ny vokatra ianao amin'ny fijerena izany. Ankoatr'izay, mbola tsy hitsara ianao amin'ny valiny amin'ny fiheverana fa ny mpiasan'ny anabolika dia hanana endrika mitovy amin'izany.
Raha toa ianao ka mahita mpaninjara HGH miaraka amin'ny famatsiana fanafody pharmaceutique, dia efa lavo ianao noho ny crème. Amin'ity tranga ity dia tokony ho lozika ny zava-mahadomelina fa tsy amin'ny pilina na ny tsiranoka.
Ny karazana fitsaboana HGH sasany dia afaka mamantatra ireo vokatra azo avy amin'ny sandoka. Ny kitapo dia mampiasa ny antikoly tsirairay amin'ny hormonina fitomboan'ny olombelona mba hahitana somatropine. Raha mividy HGH amin'ny peptide sandoka GHRP ianao, dia mbola hamela anao hahalala ny kitapo fitsiriana. Ny vidin'ny fitaovam-pitsaboana HGH dia mahalana mihoatra noho ny marika 100.
Ny fitsapana ser ny ra dia fomba iray azo antoka hahitana ny fisian'ny HGH ao amin'ny vatana. Farafaharatsiny, afaka manavaka ny hormonina mitovitovy amin'ny endriny sy ny endoginy amin'ny rafitra ataon'ny olombelona. Ny haavon'ny HGH ao amin'ny rà dia tsy fomba azo itokisana handresen-dahatra ny doping.
Misy fomba roa azo itokisana HGH detection ao amin'ny ra;
♣ Isan'ny mari-pandrefesana isan-karazany
Ny fomba fiasa isoform dia azo ampiasaina voalohany amin'ny Olympika 2004 ho fikarohana fikarohana. Amin'izao fotoana izao dia ny fitsapam-pitsaboana goavana HGH izay mandeha any amin'ny laboratoara rehetra nahazo fankasitrahana WADA.
Rehefa tafiditra ao anatin'ity hormonina artificielle ity ianao, dia misy fiovana sasany azo trandrahana any amin'ireo ranon-tsarin'ny HGH endogenous. Ny Fitsipika momba ny Immunoassay samihafa dia manamarina ny fanovana amin'ny habetsahan'ny hormonina voajanahary voajanahary ao amin'ny ra, alohan'ny hanapahana ny fisian'ny vahiny HGH.
♣ Ny test biomarkers
Ny fomba fanaraha-maso ny biomarker dia efa zato taona monja. Nampidirina voalohany ho teknika fitsapana HGH nandritra ny Lalao Olympika 2012 tany Londres.
Eto ny fitsapana dia mitombo ny fitomboan'ny IGF-1 sy ny peptide N-terminal (P-III-NP). Ireo roa ireo dia biomarkers of HGH.
9.2 Ny Hormone Hormone Olom-pirenena
Ity fanampiana ity dia anisan'ireo mpandraharaha an-trano anabolisy lafo vidy ao amin'ny indostrian'ny fambolena. Ny vidin'ny HGH dia miankina be amin'ny dingan-doha na tsia. Ohatra, ny doka am-bava iray dia mandeha eo amin'ny $ 200 sy $ 300.
Raha miahy ny valiny ianao, dia mety hihevitra ny HGH injection. Amin'ity tranga ity dia manantena aho fa tsy maintsy hanapaka ny banky ianao. Ny dosie tokana dia hivarotra ny $ 20. Raha tsy maintsy mampiditra indroa isan-kerinandro amin'ny HGH ny HGH, dia hampiakatra hatramin'ny $ 280 ny sandany. Ao anatin'ny iray volana, ianao dia hikotika ny $ 1000 amin'ny hormone mitombo. Amin'ny faran'ny herinandro XMXX-herinandro HGH, dia ho voavaha ny $ 12 ianao.
Ny fikarohana dia manaporofo fa misy karazana fampiharana HGH. Na te ho very kilao vitsivitsy ianao, hahazo vatana mangatsiaka kely, na hahazo tanjaka mahery vaika, HGH dia hanao izany.
Na dia milaza aza ny mpahay siansa sasany fa tsy misy fiantraikany amin'ny vozona ny hormone, dia misy karazana fianarana maromaro manaporofo izany. Noho ity adihevitra ity, dia tsy mahagaga anao ny antony mahatonga ny masoivoho manohitra ny doping fandraràna ny fampiasana ny HGH amin'ny fanatanjahantena, kanefa tsy manatsara ny asan'ny atleta izany. Tian'ny vahoaka ve isika hino fa ny fitsaboana an'io fitsaboana io dia mitovitovy amin'ny fisotroana vera?
Ny tombony manan-danja amin'ny fampiasana HGH dia ny vokatra azo hijanonana. Ny hany zavatra izay maty dia ny vokatra hafa. Noho izany, raha te-hijery ny vovonan'ny kibo dia tsy hita intsony miaraka amin'ny fihenan'ny hoditra sy ny kankana, Buy HGH ary ampidiro ao amin'ny fitondranao izany.
Rudman, D., Feller, AG, Nagraj, HS, et al. (1990). Ny vokatry ny hormonina ho an'ny olombelona amin'ny taona 60 fahiny. Ny New England Journal of Medicine.
Molitch, ME, Clemmons, DR, Malozowski, S., et al. (2006). Famaritana sy fitsaboana ny tsy fahampian'ny hormone ho an'ny olon-dehibe: Tari-dalana momba ny fitsaboana amin'ny endocrine. Ny Journal of Endocrinology Clinical and Metabolism.
Liu, H., Liu, V., Bravata, DM, Olkin, I., Friedlander, A., Roberts, B., Bendavid, E., Saynina, O., Salpeter, SR, Garber, AM, Hoffman, AR (2008). Famakafakana rafitra: Ny vokatry ny hormone mitombo amin'ny fahombiazan'ny atleta. Ny taom-pianarana fitsaboana.
Prodam, F., Caputo, M., Belcastro, S., Garbaccio, V., et al. (2012). Ny kalitaon'ny fiainana, ny fikorotan-tebiteby, ary ny mari-pahaizana ara-tsaina amin'ny marary olon-dehibe amin'ny tsy fahampian'ny GH.
Papadakis, MA, Hamon, G., Stotts, N., Spencer, ME, et al. (1996). Ny fiantraikan'ny toetran'ny aretim-bary amin'ny aretina ratra amin'ny lehilahy zokiolona mahasalama.
Vishal Gupta. (2011). Ny tsy fahampian'ny hormone. Ny gazety Indiana momba ny endocrinology sy ny metabolism.
Brinkman, EJ, Sharma, S. (2019). Physiology, Hormonal Growth. Famoahana ny statPearls.